Ibhulashi lamazinyo kagesi, Ikesi lamazinyo elihambayo, Irrigator yomlomo - iCharmhome
IWENZHOU CHARMHOME ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
I-Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd yasungulwa e-Wenzhou yaseChina ngo-2019 inkampani yayisebenza ngokukhiqiza, ukuklama, ukuthuthukisa nokumaketha umkhiqizo omusha wobuchwepheshe be-elektroniki.
Amazinyo akhula ngenqubo eyinkimbinkimbi lapho izicubu ezithambile, ezinezicubu ezihlangene, izinzwa nemithambo yegazi, zihlanganiswa nezinhlobo ezintathu zezicubu ezinzima zibe yingxenye yomzimba esebenzayo. Njengesibonelo esichazayo sale nqubo, ososayensi bavame ukusebenzisa isisetshenziswa segundane, esikhula ngokuqhubekayo ...
Ngesikhathi sobhadane, inkinga yamaconsi amathe afakwa e-aerosol ehhovisi likadokotela wamazinyo yi-acute Polymers ivimbela inkungu engaba yingozi ngesikhathi sokuvakashelwa odokotela bamazinyo Ngesikhathi sobhadane, inkinga yamaconsi amathe amfushane e-aerosolis ehhovisi likadokotela wamazinyo inkulu Ephepheni elishicilelwe kuleli sonto ku ...
Izimbotshana: Ziyini Futhi Sizivimbela Kanjani?
2020 / Julayi
Ngu Caitlin Rosemann AT Still University - Missouri School of Dentistry and Oral Health Bewazi yini ukuthi koqweqwe lwawo lwamazinyo yiyona nto enzima kakhulu emzimbeni womuntu? Uqweqwe ungqimba lwangaphandle oluvikelayo lwamazinyo ethu. Amagciwane asemilonyeni yethu asebenzisa ushukela esiwudlayo ukwenza ama-asidi angaqeda ...